कांग्रेस महाविधेशन : फुटको फाइदा देउवालाई, महामन्त्रीमा प्रभावशाली नेताको प्रतिस्पर्धा ! - tajanews24
लामो भाषण र बतासे गफभन्दा ‘एक्सन’मा विश्वास गर्ने देउवाले कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइ हुँदा–हुँदै पनि देशको प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरे। ‘नेपाली कांग्रेसका लागि विशिष्ट अवसर छ अहिले, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वास आर्जन गरेका नेता देउवा नै हुन्, त्यसैले उनको विकल्प १४ औं महाधिवेशनमा म चाहिँ कल्पना गर्दिनँ,’ कास्कीका एक पुराना नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू नै देउवाका पक्षमा उभिएपछि सभापति पदमा उनको जीत थप सहज भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. उद्धव प्याकुरेलको धारणा छ ।
कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापा महामन्त्रीका बलियो उम्मेदवार हुन्। कार्यकर्ता पंक्तिमा लोकप्रिय गगन कुन समूहबाट अघि बढ्ने भन्ने बारेमा अझै टुगो लागेको छैन। स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापाले गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार निःशुल्क गर्न व्यवस्था गरे । जसका कारण उनको लोकप्रियता बृद्धि भयो ।
मिडियाको बलियो साथ र कांग्रेसलाई माया गर्ने व्यवसायिक जगतको सद्भाव प्राप्त गरेका गगनको उम्मेदवारी अरुका लागि पनि चुनौती हो ।
लायन्स क्लब अफ पर्वत गुप्तेश्वर…
जिल्ला अस्पताल पर्वतको अर्को उदाहरणीय…
पर्वत समाज स्पेनद्धारा पकुवाका पहिरो…